सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा | साहित्य संसार
पाठकले जे भने पनि मलाई स्वीकार्य छ - समाश्री	भेटवार्ता - भगवती बस्नेत	नोष्टाल्जिया एक मिठो प्रेम र अनुभूति हो - लारा [LARA]	दर्शन र चिन्तनको गोठालो हुनुपर्छ आजका पाठक - समदर्शी काँइलासँग कुराकानी	फेसबुकको हल्लाखल्ला भर्चुअल मात्र हो - केदार संकेतसंग कुराकानी	साहित्य संसार लेखक सूची: सम्झनामा मेरा अग्रज,गाँउ,स्कुल र बालसखा ★ डिल्ली राम अंमाइ★ प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुन ७, २०७०
लेखक : डिल्ली राम अंमाइ विधा/श्रेणी : संस्मरण रचना संख्या :7प्रकाशन मिति : बुधबार, फाल्गुन ७, २०७० डिल्ली राम अंमाइका अरु रचनाहरु एक्कासी फेसवुकबाट थाहा पाएँ- ठूलो वुवा धनपति अम्माईँ ९४ वर्षको उमेरमा वित्नु भएछ । ३१ जनवरी २०१३ को दिउँसो फेसवुक खोलेको भाई भुमिश्वरको समाचारले मन धमिलो बनायो र मेरो अग्रज पुस्ताका समाजसेवी वुवालाई विदाई गर्न करै लाग्यो । मन विचलित भयो र मेटिनै लागेको पुरानो स्मृतिको तहलाई उहाको सम्झनाले सतहमा ल्याईदियो। उहाँले गरेको अनगिन्ति कार्यहरु जस्तै २०३१-२०३२ सालमा सुन्तलाचौरको स्कूल निर्माणको शिल्सिलामा सवै गाँउलेहरु वटुलेर कैलास खोलादेखि कुँदेको ढुंगा वोक्ने, दलिनवोक्ने र अनगिन्तिी साना ठूला खटाईहरु मेरो दिमागमा रिल झै धुम्न थाले । उहाँको सक्रिय जीवनकालमा कुन चाँहि समाजसेवा थिएन होला त उहाँले आफ्नो श्रमलाई अर्पण नगरेको । विधिको विधान नै भनौं त्यो सक्रिय जीवन रेखा इतिहासमा परिणत भैसेको छ आज ।
दिमागभित्र च्यापिएर मेटिनै लागेका वालककालका सम्झनाले त्यो इतिहासलाई खोतल्नै पर्ने निर्देशन दियो । उहाँ जो पार्थिव कवचबाट मुक्त हुनु भएपनि उहाँसँगै जोडिएको कुराले मेरो जीवनको प्रथम अध्यायलाई कतै न कतै छोएको छ र दमेकको शैक्षिक, धार्मिक र आर्थिक विकासको कुनै न कुनै विन्दुमा उहाँको नामले शव्दमा आफ्नो परिचयको माग गरिरहेको मैले महशुस गरेको छु ।
मेरो जीवनको पहिलो चरणका धेरै कुराहरु त शायद धमिलो क्षितिजभित्र विलुप्त भैसकेका छन् अहिले । म वाग्लुङ्गको पानीकटेरीबाट छर्लङ्ग देखिने गाँउ –वनहुमा हुर्केँ;त्यो गाउँमा चिभेचरी, जुरेली ,सुकेखोला तथा खोडेलामा खेल्ने कल्चुडाको पदचापलाई पच्छ्याउँदा पच्छ्याउदै कतिपटक आँगनबाट अर्को पाटामा पल्टेहुँला, खोलाको चिप्लो ढुंगामा चिप्लिएर विष्टै विष्टाले भरीएको पानीको आहालमा निथु्रक्क भिज्ने गरी लोटेहुँला, घर घर चहारेर हिड्ने विरालोलाई खेद्दै हिड्दा कति पटक डहरको बान्नाबाट सिल्टीमोरको फेदतिर मुन्टिए हुँला, त्यसको आंशिक सम्झना वाहेक मसँग केहि छैन। तर वाल चंचलताको प्रमाण स्वरुप मेरो खुट्टा र टाउकोमा लागे डोवहरु जतिसुकै मेटिने प्रयास गरेपनि सग्लो दशीको रुपमा अझै मसँग बाचेका छन् । मेरो हजूरआमाले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो—“वावु तँ सानोमा धेरै चकचके थिइस्, सर्प समात्न हिडथिइस, अनि विरालो समातेर फ्याँक्दा नंग्राले चिथोरिएर रक्ताम्मे हुन्थिस ।” वुवा अछामको लाहुरे, आमा हम्मेसा वस्तुभाउको गोठाली, म त हजूरआमासँगै हुर्केको केटा । त्यसैले कताकति घटनाहरुको सम्झना र हजूरआमाले भनेको आधार वाहेक अरु सवै यादह्ररु वालापनको समाप्तिसँगै दिमागबाट मेटिएर गइसके आज ।
म त्यस्तै ५ वर्षजतिको हुँदो हुँ । वुवा अछाममा जागिरे ,घरमा आमा, म, ठूलीवैनी रीता र हजूरआमा । साउने सक्रान्तिमा कुन्नि के के झारपारहरु जम्मा पारेर लुतो फाल्ने र फुरेउला खानुपर्ने चलन । त्यो गर्न पनि छोरा मान्छे चाहिने । कान्छो वुवा, ठूलो वुवाहरु आ—आफ्ना घर पूजामा व्यस्त भएकाले वोलाउने कुरा पनि भएन । आमा र हजूरआमाले लुतो फाल्ने जिम्मा मलाई नै दिनु हुन्थ्यो । -”घरमा छोरो मान्छे तै छस्, आज लुतो फाल्ने साउने सक्रान्ति हो, म बत्ति वाली दिन्छु र अक्षता छर्केर पूजा गरी लुतो फाल” भन्दै हजूरआमाले वत्ति वाली दिनु भयो । मैले आमा र हजूर आमाको आदेश अनुसार वाल रहर र फुरेउलाको स्वादलाई एकै ठाँउमा मिसाएर भर्भराउदो आगोको अगुल्टो पण्डित मामाको पाटातिर मिल्क्याएको अलि अलि सम्झन्छु । अगुल्टो फाल्दा भन्नु पर्ने मन्त्र “वल्याहाली गाँडा लुतो लैजा” को अर्थ के हो कुन्नी अहिलेसम्म मलाई थाहा छैन । शायद मेरो आमा र हजूरआमालाई पनि त्यसको अर्थ थाहा थिएन क्यार । मलाई त त्यतिमात्रै थाहा थियो कि- त्यो कर्म गरेवापत आमाले फुरेउला खाना दिनेछन् । मेरो ध्यान खानु र खेल्नु भन्दा वाहेक के हुन्थ्यो र त्यो वेला ।
अचेल मेरो मनले मलाइृ भन्छ—“त्यो जीवन- यो जीवन भन्दा कति पवित्र थियो, चिन्ता र लोभ मुक्त थियो, भोक लागे हजुरआमालाई अत्यायो, वस !” आत्मा बोलिरहन्छ–‘अव ती दिनका स्वर्णिम याद वाहेक के वाँकी राखेकोछस् त तँसँग । सवै त सकिसकिस्, आयु सकिस् , वालपनका मिठा लयवद्ध गीतहरु र सुमधुर वोलीहरु सकिस्, जीवनका आश्रययुक्त दिनहरु सकिस् । तेरा वुवा, आमा, हजूरआमा, र तेरो शिरमा हात राखेर आर्शिवाद दिनेहरु सकिस् । त्यो वेलाका तेरा वालसखाहरु र प्रकृतिको न्यानो मायाभित्र रमाएका सम्झनाहरु पनि सक्दैछस् ।अव तँसँग नमेटिएका याद, केही वाँच्ने दिनहरु, सुस्केरा,तनावयुक्त तन र समस्याहरुको भारी वाहेक के नै पो वाँकी छ र!”
अझै सम्झन्छु, म बनहु- मेरो आँगनको डिलबाट प्रत्येक दिन पानी कटेरीतर्फ चियाउँथें र भकुण्डेको धुरीतर्फ चील उडेको देखेर रमाउँदै आमासँग सोध्थे—“आमा त्यो डाडापारी के छ नी ? आमाले भन्नुहुन्थ्यो, —“वावु बाग्लुङ्गको ठूलो वजार छ, धनी मान्छेहरु वस्ने गाँउ छ । ठूला ठूला अस्पतालहरु र स्कूल पनि छन् ।” मैले कति बुझ्थें कति बुझ्दिनथे … ती सवै मेरो स्मृतिले मेटाईसकेको छ अहिले ।
म यो धर्ती टेकेपछि परिचयको सानो बिम्व बनाएको ठाँउ त्यै गाँउ हो बनहु ठूलढुंगा । न त त्यो वेला मलाई खोला पारीको गाँउ थाहा थियो ,न त डाँडा पारीको शहर । भकुण्डेको धुरी, भीरकटेरीको गाँउ, आफ्रेको मगरटोल,लामाखोरिया जस्ता गाँउहरु मेरो घरको पिंडीले संधै. चियाईरहन्थ्यो र ती ठाँउहरुबाट म टाढा भएर पनि आ—आफ्नो परिचयहरु म सानो छदैं दिईसकेका थिए । वल्याहा हम्मेसा साउन मैनाले सम्झाई रहन्थ्यो लुतो फाल्ने वेलामा । नजिकैको जंगल र पाखाहरुका नाम आमाका कर्मक्षेत्र भएकाले शायद सानैमा याद थियो कि ! त्यो वोहक घर वरिपरिका साथीका नाम र स्कूलका थले पिउन वाकी श्रीमतिको डरलाग्दो अनुहार मैलै कहिल्यै विर्सिन । उनी पनि हाम्रै टोलमा बस्थिन् र हमेशा हाम्रो घर आई मलाई डराउन दिन्थिन् । थले पिउन बाकी श्रीमति देखेपछि मेरो सातो जान्थ्यो रे र उनको नाम लिदैंमा मैले नदालीकन सपासप भात खान्थें रे भन्नुहुन्थ्यो मेरो हजूर आमा ।त्यो बेला हामी भलौदी-भैन्डाँडा अहिले मेरो पूजानिय जेठिआमा बसेको घरमा बस्थ्यौ ।
हामी बनहुँ सर्नु पर्यो पछी कारण थियो मेरो जेठो बुवालाई छोरा थिएनन । ज्योतिसीले घडेरी सारेपछी छोरा हुन्छन भनिदिएछ ।त्यसैले हामी बुढो घर आयौ र गेथो बुवा भलौदी आउनु भो । शायद २०३१ सालको तिहार तिरको कुरा हो, सुन्तलाचौरको स्कूल भवन वनाउनको लागि चन्दा माग्दै एउटा भैलो टोली हाम्रो घरमा पनि आयो । त्यो अझैपनि मलाई आम्सिक रुपमा याद छ । त्यो भैलो टोलीमा कतिजना थिए मैलै भन्न त सक्दिन तर त्यो टोलीमा मेरो ठूलो वुवा धनपति अम्माई, जिम्माल माइलादाई,गोबिन्द सर, रामेदाई लगायत हाम्रो टोलका पनि थुप्रै थिए । त्यो भैलोटोलीले गाएका आंशिक गीतहरु याद छन् अझै —“हे मेरा वावा, हे मेरी आमा, चन्दा दिनुस् स्कूललाई सम्झेर, तालपारी निउरो, निउरो निउरो निउरो भन्दैमा दिल विउरो… अनि धुमि आयो रेल, आँखै लाउनी कालो गाजल, बूल्बुलेलाई तेल………… आदि । त्यतिवेलासम्म सुन्तलाचौरमा स्कूल भवन रहेनछ कि क्या हो र भवनको लागि चन्दा उठाएका रहेछन् सवैले । त्यति वेलाका हेडसर गोविन्द आचार्यको नाम भुलेको छैन किनकी भैलो टोलीसँग नाच्दा उनले मेरो नाचलाई देखेर भनेका थिएरे “यो वावु त जोक्कर जस्तै नाच्दो रहेछ” उनी न्वारनपछिका नाम राख्ने अर्का गुरु भएकाले मैले कसरी भुल्नु । म छ वर्षको लागेकोले त्यहि भैलोटोलीले त्यहि दिन मेरो शिशुकक्षामा स्कूल भर्ना गरको थियो । “अव स्कूल आउ है वावु पढ्न” गोविन्द सरले कपाल सुम्सुम्याउदै भनेको मैले सम्झेकै छु ।
गोविन्द सर, प्रेम सर, फणिन्द्र सर, टीकाराम सर, जगपति सर, कृष्ण सर, दुर्गा सरहरुको त्यतिवेलाको भैलो टोलीको जति मलिन रेकर्ड राखेको छ मेरो दिमागले आफ्नै टोलका भएर होला धनपति वुवा, काँकडेमास्टर, जगपति पुसाजु, राजेन्द्र दाई,धनप्रसाद पुसाजुको सम्झना भने हो होइनको बीचमा नभएर पक्कै हुनुहुन्थ्योको स्तरमा सजाएर राखेको छ अझै मेरो अन्तस्करणले ।
त्यसैले त मलाई अफसोच छ, धनपति ठूलो वुवा वित्ने वेलामा मैले देख्न नपाएपनि उहाँले दमेक र बनहुलाई दिएको समाजसेवाको सत्कर्मको सानो अंश फिर्ता गर्ने शव्द खोजिरहेको छु आज । मलाई यो मानेमा गर्व पनि लाग्छ कि हाम्रो कुलमा उहाँजस्तो व्यक्तिगत स्वर्थबाट माथि उठेर सामाजिक सेवाको लागि जीवनका महत्वपूर्ण क्षणहरु अर्पित गर्ने अग्रजहरु पनि थिए । २०३९ सालमा मेरो वुवाको स्वर्गारोहण भएपछि आमा तराइृमा वसाई -सराई गर्न तम्सिनु भयो । त्यतिवेला उहाँले मलाई भनेको वाक्यहरुले मलाई अझै न्यानो अनुभूति दिदैछ । उहाँले मेरो घरमै आएर भन्नु भएको थियो—“तँ सानै छस् वावु, आमाले केही जान्दिनन्, सवैकुरा अरुको भरमा छोड्नुपर्छ । सानो झिटी,रकमीको हातमा पर्ला । तँ मेटिएपनि रुने कोही हुने छैनन्, त्यो ठाँउमा ।” यो कतै घर न घाटको हुन्छ कि ? टुहुरो केटा– दाजुभाई कोही नभएको ठाँउमा झन् दुःख पाउँछन् कि भाईका सन्तानले” भन्ने चिन्ताले नै मेरो आमा र मलाई धेरै सर—सल्लाह दिइरहनु हुन्थ्यो उहाँले । आज उहाँहरुको वात्सल्य र माया गुमाएको पनि धेरै वर्ष भईसक्यो तर मेरो आँखाको पर्दा पछाडिबाट र भावनाको गहिराईबाट अझै मलाई निर्देशन दिइरहेको भान भैरहन्छ उहाँले । उहाँहरु जीवित भएकोले नै टाढा भएर पनि मेरो वुवाहरु अझै हुनुहन्छ भन्ने आभाषले नजिकैबाट साउती गरिरहेको थियो । तर एक्कासी उहाँ परलोक हुनु भएको थाहा पाउँदा मन विचलित र एक्लो अनुभूति भै रहेछ आज ।
यसका अरु पनि धेरै कारणहरु छन् र त म सधै सम्झिरहन्छु उहाँलाई । उहाँले गर्दा नै मेरो हजूरआमा र आमा- दुई घण्टा टाढा हिड्नुपर्ने भएर पनि स्कूल पठाउन मञ्जुर हुनु भएको थियो । त्यसैले मेरो स्कूले जीवनसँग अलग्याएर उहाँलाई मैले कसरी पो वुझ्न र सम्मान गर्न सकुँला र ! यति कुराहरु मैले कोर्न वाध्य भएँ जुन उहाँसँगको विछोडको आवेग र प्रेरणा दुवैले गर्दा हो । उहाँसँगको विछोडको धक्काले मेरो अध्यारोले धुमिल हुन लागेको पुरानो भोगाईलाई वाल सुलभताको अनुभवसँगै एकैसाथ ताजा गराईदियो र क्रमश ; ती दिनका दिनचर्याहरु मस्तिष्कबाट निकास खोज्दै शव्द बनेर वाहिर निस्कन थाले । मैले रोक्न खोजे पनि यो मनको आँधी वेहरीलाई रोक्न सकिन ।
उहाँहरुकै कारणले म अहिले शिक्षित भएको छु र उहाँकै श्रद्धाञ्जली शव्दहरु कोरेर आफ्ना भावनाहरु पस्कन सकेको छु । भैलो अभियानमा स्कूल भर्ना भएपछि उहाँकै जोडवलले काली दिदी (सरस्वती), म, लगायत केहि केटाहरु स्कूल जान पायौं । उहाँले नै मलाई स्कूल लैजाने साथीको जोहो गरिदिन सरस्वती दिदीलाई पनि स्कूल भर्ना गरिदिनु भयो र दिदिको हात समातेर स्कूल जादै गरेको अनन्त तस्विरहरु मेरो दिमागी कोषले अझै भेटेको छैन । स्कूल जाँदाको पहिलो दिन दिनानाथ सरले हो वा फणिन्द्र सरले हो पहिलो पटक हाजिर वोलाउदै “हुजूर भन्नु पर्छ है नाम वोलाउदा” भनेको अलिकति सम्झना छ । त्यसपछिका दैनिक चर्याहरु लयवद्धरुपमा सम्झने दिमागमा खिया लागिसकेको छ । तर हजूर आमाको भनाई अनुसार कहिले रुदै आउँथे रे घरमा तुलसीले पिटेर, कहिले लोटेर । धेरै सम्झना छैन मलाई केहि अझै सम्झन्छु ।
असन्तुलित मस्तिष्कको उपज भएकोले यो लेख त्यति सन्तुलित हुँने त कुरै भएन, कतै क्रमभंग भएको छ भने कतै हठास प्रसंग परिवर्तन भएको छ । तर जे होस् ममा अझै पनि त्यो स्वर्णिम समयलाई के उपमा दिने हो शव्द चयनमा चुकेको छु झै लाग्छ । त्यो समयको जीवन कति निर्विघ्न र वालतनले ओतप्रोत थियो ? मनभित्र कस्ता कस्ता कुराहरु खेल्थे र के चाहनाले मनलाई पिरोलिरहन्थ्यो ? आफ्नै वाल वच्चाहरुको भोगाईलाई सिक्री बनाएर हेर्ने वाहेक मसँग अन्य चाहारा पनि छैन तर उत्तर सहि हुँन्छ वा हुदैन अनुमानकै भरमा के भन्न सकिन्छ र ???
आधाजति वनाएको सुन्तालचौरको स्कूल पनि ३२सालको वर्षायाममा पल्टियो र धेरै समयको दमेकवासीको मेहनत खेर गयो । त्यसपछि हामी धेरै महिनासम्म खोडलाको जंगल, नुन्थलाचौर र कुलायनथान नजिककैको ठूलो गरामा पढ्न वाध्य भयौं । पानी परेको वेला स्याखु नलग्ने हो भने हाम्रो विचल्ली नै हुन्थ्यो । हाम्रा हातका चटकी र गुन्द्रीले झोलालाई पानीबाट बचाउँदा बचाउँदै पनि कहिलेकाँहि कापी कितावहरु भिजिहाल्दथे र घरमा लगेर अगेना नजिक राखी सुकाउनु पर्दथ्यो । ती घटनाहरु अचेल सम्झिदा अस्ताउँदै गरेको चन्द्रमाले पछिल्लो शितलताको किरण दिएर विदा माग्दै गरेजस्तो धुमिल तर स्वादिलो भएर आउँछ । रुखको छहारीभित्र देखिने प्रकाश जत्तिकै याद आईरहन्छ, त्यो वेलाका प्रतेक क्षणहरुको अहिले ।
म हजूरआमाको लाडप्यारले हुर्किएको हुनाले हजूरआमासँग उहाँको माइतीगाँउ धेरै पटक पुगें । दरौंदी, त्यहि नै मेरी हजूरआमाको माइती घर थियो । गैराघरे भनेर चिनिन्थे मेरी हजूरआमाका माइतीहरु । ३-४ कक्षामा गएपछि म त्यो ठाँउ एक्लै पुग्न सक्ने भएँ । दरौंदी जेठो वुवाकोमा धेरै वस्न रुचाउने मेरो कारण भाई नारायण र मुना बैनी थिए । उनीहरु पनि मै पढ्ने स्कूलमा पढ्दथे । त्यसैले उनीहरु मेरा सवैभन्दा प्रिय वने । आफ्ना छोरा छोरीहरुको हेरविचार गर्देला भनेरै होला शायद जेठो वुवाले पनि मलाई अधिक माया गर्दै “आईरहेस् है वावु !” भन्नु हुन्थ्यो प्राय: । अचेल धेरै वर्ष भैसक्यो नारायण भाई र मुना वैनीसँग भेट नभएको । त्यहि कारणले भाई बहिनीहरुको वालककालको चेहराबाहेक मसँग सम्झनालायक अरु केही छैन आज ।
स्कूलका प्रिय साथीहरुमा कलम, दया, रामु, अग्निधर, नन्दु, सरस्वती दिदी, चिरञ्जीवी, लक्ष्मी, नाउढुङाको डिल्ली राम,भुमिराज,देउरालीखानिको रामु, लगायतका थिए । फेंदीबाट तिजु र लप्सी लिएर टाँकमा बेच्ने चक्र, दया, धनपति र परमानन्दहरुसँग अझैं तिजु र लप्सी किन्ने धोको शायद अव पुरा हुने छैन । कहाँबाट पाउनु ती हिलो नछ्यापिदैका र निर्मल मन भएका विद्यार्थी—ब्यापारी र वालसखाहरु । दया चापागाईँ साथीसँग कहिले होला फेंदीको बाटो हाँडे गएर यज्ञकोमा नासपति खाने ? ती दिनहरु सम्झिदा निर्मलताको अथाह प्रेम गंगा बगिरहन्छ यो मनमा । राजनीतिको हिलोले नगन्हउदैको त्यो प्रेम अचेल कसरी सजिब हुदैछ कुन्नीसाथीहरुको मनमा ? मलाई त्यहि कुराले कहिलेकाँहि निन्द्रा पर्दैन । भलौंदीका काले र डल्लेले काफल बेच्न छाडेहोलान् अचेल , तर मैले त खाली झुम्के झोलामा काँफलै बेचिरहेको देख्छु उनीहरुलाई कल्पना र सपनामा । अग्नी, नन्द मामा र रौदेलहरुको खनिम किन्दा किन्दा सिंगो कापी सकिएर दण्डे र किस्ने रुदैं हिडेको अझैं मैले भुलेको छैन । धनपतिले ल्याएको लप्सीको हाड पनि गोलो भएकोले किन्नु पर्ने पाँच पैसामा । चक्रले भने टाँकमा पनि बेच्दथे लप्सीका हाडहरु । गुच्चा किन्न नसक्नेहरुलाई कत्ति मद्दत गर्दथे हाम्रा परोपकारी वालसखाहरु । अचेल त हाम्रा वालसखाहरुलाई सम्झनाको पातलो पर्दाले राम्रो ठम्याउन पनि नसक्ने भईसकेछु म ।मैले छोड्दा उनिहरुको भर्खर जुँगाको रेखी बस्न थालएको थियो र तनमा पवित्र भावनाले मनलाई पखाल्दै गरेको किशोरकालको बिहानी लालिमय कान्तिकाल थियो । अझै मन घुमी रहन्छ काली दिदी,दयादाइ,छबेदाइ र आनन्द दाईको हात समातेर कहिले तर्ने होला वर्षा यामको खोडेलाको खोला ? यो सम्झने मन त हो । कालापातलबाट आउने केटाहरुले हामीलाई बाहुन भनेर हेप्ने भएकाले सँगै पढेपनि भरत छन्त्यालहरु मेरो प्रिय बन्न सकेनन् त्यो बेला । अचेल भेट्न पाए कति अंगालो मारिंदो हो उनीहरुसँग । थमबहादुर भने मिलनसार स्वभावका कारण मलाई मन पर्दथ्यो । त्यतिवेला हामीभन्दा धेरै माथि पढ्ने परी थापा, प्रेम सापकोटा, शालिकराम दाई, तुलसी, हेमराज, गोपाल, विष्णु लगायतका धेरे थिए अग्रजहरु । उनीहरुलाई सम्झने एउटै सम्झना छ मसँग, उनीहरु भएसम्म हामीलाई कहिल्यै पनि भलिवल छुन दिएनन् ।लाम्खोरिया कृष्ण दाइले पनि हामीलाई हेला गरेकै हुन,सन्झिन्छु मान्छेको बिष्ट।मा परेको भलिबल धोएर ल्याउन बाहेक बल कहिले छुन दिए त हामीलाई ? दया, छवि, अर्जुन, प्रेमहरु पनि हामीभन्दा दुईव्याज अगाडिका दाजुहरु हुन् ।
ठूलो हुँदै जाँदा अरु कुराहरु पनि थाहा हुदै आयो । बसेनीको खरवारी, निवारेको हाम्रो गोठ , दुल्यानी, पैरो, भुसुने, दास, पत्ल्यानी आफ्नो खर्क भएकाले मलाई प्यारो लाग्न थाले भने दरौंदी हजूरआमाको माइती तथा मेरा साथी वस्ने भएकोले अति प्रिय मायाको अमिट छाप बसेको छ यो छातीमा अझैं । ठूल्डाँडाँ खोरथापे मेरो सैनावुवाको घर थियो । बेला बेलामा म वासुदाईहरुसँग त्यहाँ पनि पुग्दथें । मेरो बालसखा कमल चौरासेको भ्रमणमा हिड्न नसकेर मैले बोकेको घटना विर्सनै सक्दिन अझैं । उसको घर जाँदा खनिम खान पाइने भएकाले सार्कीवारी पनि उमेर सँगसँगै नशामा चढ्दै गयो । त्यसपछिका ठाँउहरुमा भुषालवासे मामा घर भएकोले चराहरुको बचेरा खोज्दै कहिलेकाँही मेरो तन पुगिरहन्थ्यो ति पाखाहरुमा । जेष्ठमा हरिया मकै खान पाइने भएकाले आमाले वर्षको एकपटक काउले पठाउनु हुन्थ्यो । काउलेमा मेरा हजूरवुवाको भान्जाको घर थियो । हरिभाई, डिल्लीराम, लक्ष्मी, यज्ञ, लगायतका साथीहरु पनि मै पढेको स्कूलमा पढ्ने भएकोले काउले जाँदा सँगै गइन्थ्यो ।काउलेको हरी मेरो प्रिय भाई हो बाहुन बुवाको छोरा । यो पटक दशैमा आउँदा भाईलाई पक्कै भेट्ने छु ।
कति सम्झँु, कति लेखँु, जति लेखेपनि छुटेजस्तो लाग्ने, शव्दहरु हराए जस्तो हुने, पानी कटेरीबाट छर्लङ्ग देखिने मेरो प्यारो दमेकलाई मैले कहिले भुल्न सकुला र ? त्यो स्वर्गको टुक्रा जसले मलाई मेरो वालसखा रुपि कमल, अगन्धर, लठे, नन्दु, दया, हरि, राते र रामे दिएको थियो । नारायण र मुना जस्ता भाई बहिनी आनन्द, दया र सरस्वती जस्ता दाई दिदी दिएको थियो । गुच्चा खेलेर नथाक्ने नन्दे, चक्रे, डन्दपानि ,धनपति, टंके, दिनानाथ, यज्ञ र रामु दिएको थियो । त्यस्तै सहाराको लागि धनपतिबुवा , तुलसी बुबा,नयाघरबुवाहरु,ठुलिआमा,सानीआमा लगायतका अविभावक र गाँउबाट जिम्मालदाई र निवारेबाट परि मामा दिएको थियो । आज मेरो साथमा रित्तिईसकेका आशा, भड्किला सन्तान, कर्तव्य र तनावले च्यापिएको स्थुल तनभन्दा बढी के नै छ र ? समयको गतिसँगै सवै विवशताको घट्टले पिसिई त सकें । अहिले न त मसँग टाँकमा लप्सी र तिजु बेच्ने वाल सखाहरु ने छन्, न त रौंदी र सार्कीवारी लगेर खनिम र सादेका निवुवाहरु लुकाई लुकाई खुवाउने कमल,किश्ने, हरिलाल र रौदेल दाईहरु नै छन् । त्यस्तै न त मसँग पहिरा र खोलेटाका माछा र कल्चुडाका गुडहरु देखाईदिने छवे, प्रेम र गौरेहरु नै छन् । परिवारसँग भएर पनि म आज एक्लो भएको छु । भड्किएको जिन्दगी र तड्पिएको तनलाई मेरो प्यारो गाँउ दमेकले बोलाईरहेको सुनेको छु । सपनामा धेरेपटक भेटेको पनि छु । चित्रे दाईले काफल चोर्दा चोर्दै समातेर ख्वाएको सिप्कानोको स्वाद अझै मेटिईसकेको छैन । तैपनि म जेलमा बन्दी जीवन विताएको महश्ुस गरिरहेको छु किनकी चाहेर पनि म कतै जान सक्दिन ।
आशा मात्र गरेको छु, अव छिट्टै दमेक जानेछु र डम्वर सरको घरमा गएर सपनाका कथामा रम्नेछु । कुर्धेल प्रेमसरको कुटे औंलाको थप्पडले धेरै रात सुतेको थिइन सानोमा । मेरो भविष्यलाई उज्वल बनाउन हानिएको त्यो थप्पडलाई चुम्ने र सलाम गर्ने कल्पना गडेको छ मनमा । फणिन्द्र सर, दुर्गा सर र गोविन्द सरहरुबाट फेरि एकपटक कान निमोठ्याईको स्वाद लिएर पागल बन्ने धुन चडेको छ मनमा, अनि परिसरको हात समातेर निवारेबाट सुन्तला चौरको स्कूलसम्म आउने यो धोको धोकै रहने होला अव । यो मेरो पागल कल्पना, यादसँगै दिमागी सन्तुलन गुमाउन थाल्यो । मनले मनलाई भन्न थालिसकेको छ “कल्पना तेरो यादमा कुनै दम छैन किनकी तेरो धनपति वुवासँग वसेनीको खरवारीमा गएर ढुकुरका बचेराहरुसँग खेल्दै खर काट्ने धोको छ भन्थिस् खै तेरो सपना कहाँ गयो ?” सम्झन्छु, यो मनको पागल पन हो -मलाई प्रिय लाग्ने साथीहरु वालक कालिन निर्मल युगको समाप्तिसँग फेरिएका छन अरे । नजिकै आएर पनि तेरा सुदामाहरुले तलाई भेट्ने चासो राख्दैनन् अरे, लक्ष्मीहरु स्वस्थानी धुनमा आरती गर्दैछन रे नयाँ धुनमा ,अग्नी र चक्रहरु पनि सपनाको झमेलाले विपनालाई रुवाएर अरु शान्ताप कल्पेर बसेका छन्कि? आग्रहभन्दा अगाडिको नाता तोडेर पूर्वाग्रह पछाडिका सवै नाता उमेरसँग हुर्केका विविध प्रकारका तामसी तामझाम र आसुरी संस्कारले दबाइएर निरीह बनाइ दिएको छ जस्तो लाग्ने मनमा ।फगत त्यो मेरो कल्पना मात्र पनि हुन सक्छ ।दैब !मेरा साथीहरु पहिले झै सुकिला र पहिलेका झै पवित्र सुगन्धी भेट्न पाउँ । त्यसैले भनिएको होला ‘एकोहोरो भातृत्वको कोकोहोलोले वाल सुलभताको संगीत घन्किदैन ।’ सवै आफ्नो बाँसुरीको धुनले मग्न छन् र जीवनको हिरा काललाई धन, मान र कालो कोटको शानरुपि वादलले आफ्नो सम्झना कोषबाट उतारि सकेका छन कि जस्तो सोच्ने पापी मनले ।यसभन्दा बढी मेरो वालसखाहरुलाई के पो भन्न सकिएला र ? रोएको मनले आफ्ना प्रारम्भिक चरणका अस्वस्थामाहरुलाई गुनासो पोखेर किन आफैं काउँछो वन्ने । गुरुहरु पनि त्यस्तै हालतमा होलान् शायद । बुढौंलीपनको मनोदशा बोकेर गुलियो चियाको चस्काले आफ्ना चेलाहरुका गुलावी गालाहरु निमोठेको भुलि सकेहोलान् । मनले खवरदारी गरिसक्यो मलाई “पख वक वक नगर, त पागल हुदैछस्, डिल्ली! अव धेरै नसोच्, सक्छस्, साथीहरु झैं त पनि फेरिई नसक्ने भए वालककालका अमृत रुपि सपनाहरु पिएर बाँच्न सिक।।।अस्तु
डिल्लीराम अम्माईँ (अनाथ अंकल)
साहित्यसंसार नेपाली साहित्यको सानो संसार Welcome Kandel says:	July 13, 2014 at 9:23 am	thank mama
Maya Pathak says:	May 22, 2014 at 7:53 am	good